LG သည်မကြာမီအချိန်အတွင်းမိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ် Androidsis
တောင်ကိုရီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး LG Electronics ၏မကြာသေးမီကတစ် ဦး နှင့်အတူ၎င်း၏ 2018 နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေကြေညာခဲ့သည် အထင်ကြီးခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကုမ္ပဏီသည်အမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၅၄.၄ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီးအမြတ်အစွန်းမှာဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် LG Mobile သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ဖုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖက်လိမ် တစ်ဦးနှင့်အတူ သန်း 700 ၏အသားတင်အရှုံး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီ၏အခြားဌာနခွဲများအမြတ်အစွန်းမှတ်တမ်းတင်နေစဉ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒေါ်လာ။ သို့သော် LG Electronics ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Qiao Yujin မှကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မကြာမီအချိန်အတွင်းမိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
CEO ဖြစ်သူက IoT ဂေဟစနစ်တွင်စမတ်ကားများနှင့်ကရိယာများပါ ၀ င်သည်။ စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မကြာမီအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းလုပ်ငန်းမှထွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ. (ဆက်စပ်: LG ကသူ၏ဖုန်းလုပ်ငန်းကိုဖိလစ်ပိုင်တွင်ပိတ်ပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Sony နှင့် HTC တို့သွားနေသလား။)
Qiao သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးသည်ဒုတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် စမတ်ဖုန်းစီးပွားရေးကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။ ထို့အပြင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်နောက်နှစ်အထိဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူကအီလက်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းဌာနခွဲကိုလျှော့ချရန်မရည်ရွယ်သော်လည်းစားသုံးသူ၏ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မော်ဒယ်သစ်ကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် LG က G8 ThinQ. (ဆက်စပ်: 5G နည်းပညာကိုစောင့်နေတုန်း LG က 6G network အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြီ)
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်အစီရင်ခံစာသည်စုစုပေါင်း ၁၅ ရပ်ကွက်ရှိပြီးစတုတ္ထဆက်တိုက်နှစ်ကိုညွှန်ပြသည် LG Mobile သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဒေါ်လာ ၁၉၂ သန်းအရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။ LG က 5G ဖုန်းများသည်ပြည့်နှက်နေပြီးဖြစ်သောအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်သို့ပြန်လာနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဒါဟာမျှော်လင့်ရသည် G8 THINQ အတူတကွပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည် V50 ThinQ 5G, LG ၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဟုတ်ပါတယ်, LG ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားရှိနေပေမယ့်မိုဘိုင်းဌာနခွဲကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ
Play Store တွင်မရရှိနိုင်သည့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အက်ပ်များ၏ beta များကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း